Qadar siday ku maaraysay cad iyo caano la'aantii soo wajahday? - BBC News Somali
Image caption Beerta Baladna waxaa lagu dhaqaa nafaf lo' ah oo gaaraya 10,000
Waa goob lama degaan ah oo ku taalla xero lagu xannaaneeyo lo'da Qadar, waxaan lagu xiray qaboojiyeyaal, lo'da halkan waxaa naasaheeda lagu xiray aalad caanaha ka lisaysaa, dhaqashada lo'da waxay noqotay isha dhaqaale ee dowladda.
Sannad ka hor, Qadar ma aysan dhaqan jirin lo'da irmaanka ah, waxayna ku tirsanayd caanaha uga imaan jiray dalka Sacuudiga, balse hadda beerta Baladna ayaa lagu dhaqaa nafaf lo' gaaraya 10,000, waxaana lo'dani laga soo dhoofiyay dalka Mareykanka.
Neefkii ugu horeeyay oo lo' ah waxaa lagu soo duuliyay diyaaradda Qadar bil uun kaddib uu billaawday khilaafka u dhexeeyay dalalka khaliijka islamarkaasna dalkan yar ay go'doomiyeen dalalka carabta ee jaarka la ah.
Dhaqashada lo'da waxay Qadar uga dhigantahay astaan dahabi oo muujinaysa isku filaansho.
Maamulaha beerta lagu dhaqo lo'da Qadar Peter Weltevreden wuxuu yiri "qof kasta wuxuu rumaysanaa in tallaabadan aanu hergalynin balse hadda waan ku guulaysanay"
Wuxuu sidoo kale sheegay inay ballan qaadeen sanad kaddib markii go'doominta la saaray Qadar inay soo saari doonan caano ku filan dalka.
Image caption Qadar waxay dadaal ugu jirta sidii ay xoojin lahayd dhaqaalaheeda inkastoo cunaqabatayno ay saaran tahay
Wasiirka arrimaha dibadda Qadar Sheikh Muxamed Abdulraxmaan Al-Thani wuxuu sheegay in go'doominta la saaray dalkiisa looga golleeyahay in dalalka khaaliijka ay doonayaan inay la wareegaan awoodda gobolka.
Waxaa lagu sheegay 'Amiirka inuu tageero Maleeshiyaadka Xisbullaah ee dalka Lubnaan iyo ururka Xamaas ee ka dagaallama Qaza, isagoona ku anddacoonaya in Donald Trump uusan madaxweyne kasii ahaani dooni Mareykanka.
Image caption Waa calanka Iiraan oo lagu arkay goob salidda laga soo saaro oo ku taalla Khaliijka
Ali Shihabi oo ah asaasaha ha'ayadda Arabia ayaa sheegay in khilaafka uu daboolnaa muddo 20 sanna ah balse muddo sannad oo kaliya ah ayuu kusoo shaac baxay.
Image caption Dadweynaha Qadar waxay muujinayaan rajo wanaagsan
Wasiirka arrimaha dibada Qadar Al-Thani wuxuu yiri " Iiraan waa dal aan deris nahay oo uu naga dheexeeyo xiriir iskaashi iyo mid ganacsiba"
Dadwyanaha reer Qadar waxay rajo ka qabaan in uu dhamaanayo go'doominta saaran oo kala goysay dadka qaraabada ah ee ku kala nool dalalka gobolka.
17 Luulyo 2017
3 Luulyo 2017